Fanondranana sokatra: « Tambajotra matanjaka, misy olona ambony », hoy i Tambison Damase | NewsMada
Fanondranana sokatra: « Tambajotra matanjaka, misy olona ambony », hoy i Tambison Damase
« Manahirana ary sarotra ny fanenjehana ireo tambajotra mpanondrana sokatra, noho ny fisian’ny olona ambony tafiditra amin’izany », hoy ny filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany any Miandrivazo, i Tambison Edmé Damase. Milaza ny fahitany ny zava-misy hitany tany Ambovombe, nandritra ny naha fampanoavana azy tany an-toerana izy, nanomboka ny taona 2014 hatramin’ny aogositra 2018.
« Azo atao tsara ny miaro ny tontolo iainana sy ny zavaboahary ao aminy, raha tena misy ny fampiharana ny lalàna », hoy io mpitsara io. 3.442 ny sokatra tratra naverina, nandritra ny fotoana niasany tany Ambovombe. « Matanjaka ny tambajotra amin’io fakana sokatra io, indrindra ireo mpanondrana azy any ivelany. Ireo mihinana azy indray, moramora ihany ny manenjika azy ireny », araka ny fanamarihan’io mpitsara io ihany.
Ny volana avrily tamin‘ity taona ity, nisy 10.000 ny sokatra tratra be indrindra, tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Trano iray tany Toliara nahitana azy ireo. Naheno fofona hafahafa ny manodidina ka nanaitra ny polisy. Izay no nahatrarana ireo sokatra ireo rehefa nosavain’ny polisy sy ny mpiasan’ny tontolo iainana ny trano : hatrany an-dakozia sy efitra fivoahana nahitana ireo sokatra ireo. 180 efa maty.
Nanomboka ny taona 2005 ka hatramin’izao, raharaha maloto iray goavana ny fanondranana sokatra avy eto Madagasikara. Tsy latsaky ny 5.000 isam-bolana izany, raha ny tombantombana nataon’ny WWF. Misy ihany ny tratran’ny polisy sy ny mpiasany ladoany, saingy tsy hita ny tohiny ao amin’ny fitsarana, afa-maina ireo voampanga, ny biby mety mbola manjovana.